कर्मचारीको परीक्षणपछि हेटौंडा अस्पतालको ओपीडी सिल गर्ने निर्णय « News of Nepal
कर्मचारीको परीक्षणपछि हेटौंडा अस्पतालको ओपीडी सिल गर्ने निर्णय
हेटौंडा स्थायी ठेगाना भएकी एक महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि हेटौंडा अस्पतालले बहिरंग (ओपीडी) सेवा बन्द गर्ने विषयमा छलफल थालेको छ ।उक्त अस्पतालमा उपचार गरी काठमाडौं रिफर गरिएकी महिलामा कोरोना पुष्टि भएपछि तत्काललाई उक्त सेवा बन्द गर्ने तयारी गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
अस्पतालमा शनिबार बसेको विशेष बैठकबाट अस्पतालका सबै कर्मचारीलाई १ साता क्वारेन्टाइनमा राख्ने र कोरोना जाँच गर्ने निर्णय भएको छ । अस्पतालका १ सय ५५ कर्मचारीको परीक्षणपछि ओपीडी सिल गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा रिपोर्टबाट थाहा हुने कोरोना युनिट संयोजक डा. हरिबहादुर खड्काले बताउनुभयो । रिपोर्ट आइतबार विहानसम्म आइसक्ने संयोजक डा. खड्काले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालका अनुसार कोरोना संक्रमित महिलासँग विभिन्न चरणमा भेट भएका वा उनको उपचारमा संलग्नलगायतको खोज र पहिचान गरी परीक्षण गर्ने तथा आइसोलेसनमा राख्ने कार्य भइरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हेटौंडा–३ की ५४ वर्षीया महिलामा कोरोना पुष्टि भएको सूचना सार्वजनिक गरे पनि ती महिला हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा–४ की स्थायी बासिन्दा भएको खुलेको हो । परिवारले फर्म भर्दा स्पष्टसँग हेटौंडा–४ नै भरिएको छ ।
जेठ ४ गते हेटौंडा अस्पतालबाट रिफर भएर काठमाडौं गएकी ती महिलाको स्वाब काठमाडौंमा परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको थियो । उनी हेटौंडाबाट गएकोले कोरोना परीक्षणका लागि नमूना संकलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको परीक्षणमा शुक्रबारको रिपोर्टमा पोजेटिभ देखिएको थियो ।
उनलाई मुटुको समस्याका कारण हेटौंडा अस्पतालमा उपचारपछि टिचिङ अस्पताल रिफर गरिएको थियो । महिलामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको, काठमाडांै र हेटौंडामा उनीसँग सम्पर्कमा रहेकाको खोजी भइरहेको हेटौंडा अस्पताल प्रमुख डा. प्रवीण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
स्वाशप्रस्वासमा समस्या आएका कारण उनलाई काठमाडौं रिफर गरिएको थियो । महिलाको त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमको महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोभास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचार भइरहेको जानकारी दिइएको छ ।
उनको पेट र मुटुमा समस्या थियो । उनलाई हेटौंडा अस्पताल लगियो । अस्पतालमा चेकपछि आवश्यक उपकरण अभावका कारण चितवन वा काठमाडौं लैजान सल्लाह दिइयो । त्यसपछि बिरामीलाई काठमाडौं शहीद गंगालाल अस्पताल लगियो ।
अस्पताल पुगेपछि पेट सुन्निएका कारणले टिचिङमा लैजान र त्यहाँ भए मुटु र पेट दुवैको राम्रो उपचार हुने भनिएपछि टिचिङ अस्पताल लागियो । त्रिवि शिक्षण अस्पताल हाताको मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा पुगेपछि ४ गते नै आरडीटी परीक्षण गरियो । नतिजा नेगेटिभ आयो ।
त्यसपछि अस्पतालले बिरामीको भर्ना ग¥यो । ५ गते पुनः आरडीटी परीक्षण गरियो । त्यसको नतिजा पनि नेगेटिभ आयो । हातहरु सुन्निएका कारण बिरामीलाई ६ गते सामान्य ज्वरो आयो । त्यसपछि चिकित्सकले पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरे । त्यही पीसीआर टेष्टमा नतिजा पोजेटिभ देखियो ।
‘छोरी फागुन २१ गते क्यानडाबाट आएकी हुन् । त्यस दिनयता परिवार होम क्वारेन्टाइनमै बसेका छन् । अनावश्यक बाहिर हिँड्ने काम गरेका छैनौं,’ परिवारजन भन्छन्–हामी परिवारका सदस्यबाहेक अन्यसँग लापरबाही तरिकाले भेटघाट गरेका छैनौं । फागुनमा छोरी आएकी । जेठ दोस्रो साता सुरु भइसकेको छ । त्यसकारण बिरामीलाई हेटौंडामा संक्रमण भएको हो भन्ने लाग्दैन ।
हेटौंडामा संक्रमण हुन्थ्यो भने २ पटकसम्म आरडीटी जाँच गर्दा नेगेटिभ आउने थिएन । जे समस्या भयो, काठमाडौंका अस्पतालमै भयो कि भन्ने लागेको परिवारको आशंका छ । हाल बिरामीको अबस्था सामान्य छ । ज्वरो आएको छैन । मुटु तथा पेटको अबस्था पनि सामान्य छ । ‘हामी हाल सेल्फ क्वारेन्टाइनमै छौं । हामीसँग सम्पर्क भएकाबारे सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइसकेका छौं,’ परिवारको भनाइ छ ।
घरेलु कामदारका रुपमा लण्डनमा रहेका एक
दैलेखको क्वारेन्टिनमा एक युवकको मृत्यु, थप